Egwu Amazon HD Na-enye n'efu maka ọnwa 3 na-agwụ taa | Gam akporosis
Ruo mgbe ọnwa ole na ole gara aga, naanị ụzọ ndị ọrụ enwe gụgharia music na elu definition Ọ bụ site na Tidal. Ná ngwụsị afọ gara aga, Amazon Music HD rutere Spain na 2021 ọ ga-emekwa Egwu Spotify, Gụgharia music ibu-elu-edu music gụgharia ọrụ.
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị nkwalite nke Amazon malitere maka ọrụ egwu ya na-asọpụta na nkọwa dị elu, ọrụ ndị Prime nwere ike were uru maka ọnwa 3 n'efu na ndị na-abụghị Prime ọrụ maka 1 ọnwa. Nke a na-enye mechie taa, March 1 na 23:59 ma obu na Spain maka ndị ọrụ ọhụrụ.
2 Nwee onyinye ahụ
Amazon Music HD na-etinye ihe anyị nwere karịa nde 70 na nkọwa dị elu, mana na mgbakwunye, ọ na-enye anyị nnukwu di na nwunye na nkọwa dị elu, ogo nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ dị ka onye na-ede egwu. tụụrụ egwu site na ịdekọ ya na studio.
Ọrụ gụgharia egwu na-enye anyị ogo kacha elu nke 320 kbps, ebe Amazon Music HD na-enye anyị ruo 850 kbps, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ ka mma nke ọkọlọtọ gụgharia ọrụl. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nnukwu ịkọwa okwu dị elu, anyị ga-ekwurita ihe ruru 3.730 kHz, 24 ibe n'ibe ya ruo 192 kHz.
Nkwalite a na-ejedebe na awa ole na ole, yabụ ọ bụrụ na i jiribeghị ya mee ihe, ị nweghị ihe ga-efunahụ gị, ọkachasị ọ bụrụ ị nwere ezigbo ndị kwuru okwu inwe ike ịchọpụta ihe dị iche na mma nke ọrụ a na-enye anyị na nkọwa dị elu na ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwu efu » Onyinye Amazon Music HD Na-eweta Onwa 3 Na-akwụsị Taa